गर्भावस्था, प्रसूतिकाल तथा स्तनपान - Hesperian Health Guides
हेस्पेरियन स्वास्थ्य विकि > महिलाका लागि डाक्टर नभएमा > यस भागमा 17: एचआइभी र एड्स > गर्भावस्था, प्रसूतिकाल तथा स्तनपान
गर्भावस्थाले महिलाको एचआइभी अवस्थालाई खराब गर्दैन । तर, एच.आई.भी. वा एड्स भएका महिलाको गर्भावस्था धेरै जटिल बन्न सक्छ । यस्ता जटिलताहरु आउन सक्छन्ः
अन्य अवस्थाका महिलाका जस्तै एच.आई.भी. संक्रमित महिलाको पनि गर्भवति हुने, नहुने र कहिले हुने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार छ ।
एच.आई.भी. भएकी महिलाको बच्चा धेरै बिमारी भएर जन्मेको छ भने उ सम्भवत संक्रमित हुनसक्छ, त्यस्तो बच्चालाई स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल जचाँउन लग्नुहोस् ।
बच्चा जन्माइसके पछि गम्भीर संक्रमण हुनु र निकोहुन कठिन हुनु ।
बच्चा महिना नपुगी जन्मनु वा एचआइभी संक्रमण भई जन्मनु । यस्ता
समस्याहरु भएपनि, धेरै महिलाहरू एच.आई.भी. संक्रमित भए तापनि गर्भवति हुन्छन् र बच्चा पाउँछन् ।
यदि तपाईं गर्भधारण गर्न चाहनुहुन्छ र तपाई वा तपाईको जोडीलाई एच.आई.भी. संक्रमण भएको शंका छ भने तपाईंहरु दुबैले परीक्षण गराउनुपर्छ । यदि एच.आई.भी. परीक्षण गर्न सकिदैन भने यसको खतरालाई कम गर्न तल दिइएका सुझावहरू पालन गर्नुपर्छ ।
यौनक्रिया गर्दा प्रजनन उर्वर अवधि बाहेक अन्य अवधीमा कन्डमको प्रयोग गर्ने वा सुरक्षित यौन अभ्यास अपनाउने ।
गर्भाधान हुन नसक्ने बेलामा सुरक्षित यौनक्रिया गर्ने,यौन प्रसारित संक्रमणका चिह्नहरू देखिए भने यौनक्रिया गर्दै नगर्ने । यदि सम्भव छ भने, सबै गर्भवति महिलाले सिड ४ परीक्षण गराउनुपर्छ ।
यसले महिलाको प्रतिरक्षा प्रणाली कतिको बलियो रहेछ भन्ने जानकारी दिन्छ । सिडि ४ कोसंख्या ३५० भन्दा कम छ भने उनको आप्mनो शरीरलाई एआरटी आवश्यक पर्छ । यदि तपाईं गर्भवति हुनुहुन्छ र एचआइभी भएको छ भने, आप्mनो शरीरको हेरचाह गर्नुअति महत्वपूर्ण छ । यसका लागि राम्ररी भोजन गर्ने, अन्य बिमारी (जस्तै औलोहरुको रोकथाम र उपचार र एचआइभीको उपचार गर्नुपर्छ ।
एआरटीको प्रयोगबाट गरिने रोकथाम र उपचारले तपाईं र तपाईंको बच्चालाई स्वस्थ राख्छ
बच्चालाई गर्भमा वा प्रसूति अवस्थामा वा स्तनपान पनि अवधिमा संक्रमण हुनसक्छ । विना उपचार, एच.आई.भी. भएकी आमाले जन्माएका तीन बच्चामध्ये एउटा बच्चा एच.आई.भी. संक्रमित हुन्छ । एआरभी औषधिहरुले तपाईंको स्वास्थ्यलाई त सुरक्षित गर्छ नै गर्भको शिशुमा भाइसर सार्ने जोखिम धेरैकम गर्छ भनेः यस्तो अवस्थामा गर्भावस्थाका आमाबाट शिशुमा हुने संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँग जाँच गराउनुहोस् ।
एच.आई.भी. पोजेटिभ भएका आमाले आफ्ना शिशुहरूमा एन्टिवडिज (तर जहिले पनि एच.आई.भी. चाहिँ होइन) सार्ने गर्छिन् । भर्खर जन्मिएको बच्चाको परीक्षण गर्दा जहिले पनि एच.आई.भी. पोजेटिभ देखिने गर्छ किनकि आमाको एन्टिबडिज बच्चाको रगतमा देखिने गर्छ तर धेरै बच्चाहरू वास्तवमा एच.आई.भी.बाट संक्रमित नभएका पनि हुन सक्छन् । बच्चा १८ महिना पुगेपछि गरिएको परीक्षणले मात्र एच.आई.भी. भए नभएको भन्ने कुरा छुट्याउन सम्भव छ । त्यस अवधिमा आमाको एन्टिबडिज रगतबाट हराइसकेको हुनेछ वा नहराएको भए त्यस बच्चालाई एच.आई.भी. संक्रमण भएको बुझ्नुपर्छ । हाल बच्चा ६ महिना पुगेपछि नै एचआइभी पोजेटिभ बताउन सक्ने परीक्षण कहीं कहीं प्रयोगमा आएको छ ।
आमाबाट शिशुमा हुने एचआइभी संक्रमण अधिकांश रुपमा प्रसूति कालमा नै हुन्छ । बच्चा जन्माउनु अघि र पछि एआरभी दिएर आमा र बच्चालाई जोगाउन सकिन्छ । बच्चा जन्मेको ४ घण्टा अघि नै पानी जालो फुटेको, शिशु निस्कने मार्ग च्यातिएको, र सामान्य प्रसूति हुँदा भन्दा बढी रगत र योनी स्रावसँग बच्चाको लसपस भएको अवस्थामा भाइरस प्रसार हुने जोखिम अति नै बढी हुन्छ ।
एचआइभी संक्रमितलाई प्रसूति अवस्था पछिको संक्रमण खतरनाक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै उपचार गराउनु आवश्यक छ ।
आमाको दूधबाट स्तनपान गर्ने बच्चालाई एच.आई.भी. संक्रमण सर्नसक्छ । यस्तो जोखिम यदि आमा भर्खरै मात्र संक्रमण भएकी हुन् वा एड्सको ज्यादै बिमारी छन् भने अलिक बढी हुन्छ । स्तनपानको क्रममा हुने संक्रमणलाई कम गराउन निम्न कुराहरु गर्नु पर्छः
आप्mनो स्वास्थ्यका आवश्यक छ भने नियमित वा स्तनपान गराउने अवधिभर एआरटी लिनुहोस् ।
बच्चालाई उ ६ महिना नहुन्जेल वा भात नखुवाउन्जेलसम्म आमाको दूध बाहेक अरु आहार (पानी पनि) नदिनुहोस् ।
स्तन वा स्तनको मुन्टामा संक्रमण हुन नदिनुहोस् र मुन्टा चिरिनबाट जोगाउनुहोस् । यस्तो भएको कुनै चिह्नहरु देखापरेमा तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई जचाउनुहोस् ।
अन्य प्रकारका दूध यदि बच्चालाई आवश्यक परेजति र सुरक्षित तरिकाले खुवाउन सक्नुहुन्छ भनेमात्र शुरु गर्नुहोस् (यस बारे निर्णय गर्न तलको कुरामा बिचार गर्नुहोस् ।
कयाँै स्थानहरुमा एचआइभीको जोखिम भन्दा अन्य प्रकारका तरल आहारा र फोहोर पानीबाट हुने दिशा पखाला र न्युन पोषणको बढी जोखिम हुन्छ । यस्तो खासगरी ६ महिनासम्मका बच्चालाई हुनसक्छ । यसकारण बच्चा ६ महिनाको होउन्जेल एचआइभी भएकी महिलाको बच्चाकोलागि स्तपानमात्र अति सुरक्षित हुनसक्छ । अनि ६ महिनापछि, एक वर्ष होउन्जेल सम्म, बच्चाको आहारका साथै दूध समेत चुसाउन पर्छ । यो गर्दा बच्चाको आवश्यक पोषण पुग्नुपर्छ । यो काम साधारणतया हप्तामा तीन दिन दूध चुसाई गर्न सकिन्छ ।
स्तनपान गराउने नगराउने बारे निर्णय लिनुअघि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरु
शिशु आहार तथा आमाबाट शिशुमा हुने संक्रमणको रोकथाम (पि एम टि सि टी) सम्बन्धी तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले तलका कुरामा विचार पुर्याउन सहयोग गर्नसक्छन्ः
के तपाईंका क्षेत्रमा केटाकेटीहरू प्राय गरी बिरामी हुने वा झाडा–पखाला वा न्यूनपोषणले गर्दा मर्दछन् ? यदि यस्तो हो भने स्तनपान गराउनु उत्तम हुन्छ ।
के तपाईंको एआरटी उपचारमा पहुँच छ ? यस कुराले एचआइभी भएकी महिलाका लागि स्तनपान सुरक्षित गराउँछ ।
के स्वच्छ, पौष्टिक दूध उपलब्ध हुन्छ ? तपाईंले ६ महिनाका लागि दूध किन्नु पर्नेहुन्छ जुन महंगो हुन्छ । साथै प्रशस्त मात्रामा सफा उमालेको पानी आवश्यक हुन्छ र बच्चालाई दूध कप वा चम्चाले कसरी खुवाउने भन्नेबारेमा जानकारी पनि जरुरत पर्छ । गाईवस्तुको दूधमा शिशुका लागि आवश्यक पर्ने पोषण तत्व हुँदैन । त्यसकारण अन्तिममा यो खुवाउनेबारे सोच्नुहोस् । यसमा भिटामिन, चिनी र सफा पानी मिसाउनु आवश्यक छ । कुन प्रकारको दुध आवश्यक पर्छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई सोध्नुहोस् ।
"http://ne.hesperian.org/w/index.php?title=Where_Women_Have_No_Doctor:गर्भावस्था,_प्रसूतिकाल_तथा_स्तनपान&oldid=322" बाट निकालिएको